အကောင်းဆုံးငွေသို့ပြန်သွားရန် Apps ကပ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » 2019 အကောင်းဆုံးငွေသို့ပြန်သွားရန် Apps ကပ: ငွေတိုင်းအချိန်ကိုသင်ဆိုင်ရယူနိုင်သော
2019 အကောင်းဆုံးငွေသို့ပြန်သွားရန် Apps ကပ: ငွေကိုသင် APK ကိုစျေးဝယ်တိုင်းအချိန်ရယူနိုင်သော
အဘယ်သူသည်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်အတွက်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့မလိုချင်ပါသလဲ? ယနေ့ခေတ်, သင်သည်သင်၏အလိုရှိသောထုတ်ကုန်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ပင်နာရီအတွင်းသင့်ရဲ့နေအိမ်များမှကယ်နှုတ်ရနိုငျသညျ။ စျေးဝယ်နေစဉ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့အကောင်းဆုံးငွေသားပြန် apps များမရှိမရှိခြင်းရှိပါသည်။
သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးလက်ခံရရှိဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံရွေးချယ်ထားသည့်အမှတ်တံဆိပ်မှာစျေးဝယ်ဖို့ဆုလာဘ်ပြန်လက်ငင်းငွေချေရနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်အဲဒီ apps တွေကိုသုံးစွဲဖို့တကယ်တန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြသည်။ ပြည်သူ့နေစဉ်ပိုက်ဆံချွေတာတွေအကြောင်းသတိလာပြီဖြစ်ကြောင်း အွန်လိုင်းစျေးဝယ်.
သငျသညျအထူးနှုန်းများ codes တွေကိုထံမှသဘောတူညီမှုနှင့်အထူးလျှော့စျေးအမျိုးမျိုးတို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်ရုံစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုရပ်တန့်မနိုင်လျှင်, ဤနေရာတွင်သင်ကကြိုးစားသင့်ကိုအကောင်းဆုံးငွေသားပြန် app များကိုတချို့ရှိနေပါတယ် -
ယခင်က Ebates, သည် Rakuten စတိုးဆိုင်များသင်စျေးဝယ်အခါတိုင်းပူးပေါင်း 2500 ကျော်ကျောဘက်မှာငွေသားပေးထားပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအခမဲ့အကောင့် sign up ကိုရသောအခါငွေဝင်ငွေသုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် -
Rakuten.com မှတဆင့်တိုက်ရိုက်စျေးဝယ်။ တစ်စတိုးဆိုင်ရှာရန်ပြန်စျေးဝယ်နေစဉ်ငွေသားရ။
browser ကိုပေါ်သည် Rakuten ငွေသို့ပြန်သွားရန် extension ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း။ Rakuten နှင့်အတူပူးပေါင်းသည့်စတိုးဆိုင်များမဆိုမှာစျေးဝယ်သည့်အခါကငွေသားပြန်မရရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလညျးဤခလုတ်ကိုနှင့်အတူအထူးနှုန်းများ codes တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်သည် Rakuten app ကို download လုပ်ပါ။ သငျသညျအစား PC ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတဆင့်ပိုပြီးစျေးဝယ်လြှငျ, Rakuten app ကိုစမ်းကြည့်ရကျိုးနပ်သည်။
သငျသညျ PayPal ကနေတဆင့်ပြန်ငွေရဖို့သို့မဟုတ်တိုင်းလအနည်းငယ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြိုဆိုဆုကြေးငွေအဖြစ်ကိုလည်းအောငျ $ 10 နိမိတ်လက္ခဏာကို-Up ၏ 25 လအတွင်းသူတို့၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ $3ဖြုန်းခြင်းဖြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစမိသားစုနှင့်အတူဒီ app ကိုမျှဝေ ပေး. သူတို့ကိုဤ app ကိုတဆင့်ဝယ်ယူရာတွင်များအတွက် $ 25 ၏လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေပေးထားပါတယ်။
ဤသည်ငွေသားပြန် app ကိုအလွန်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေသည်။ သင်ရုံသင့်ရဲ့ Dosh အကောင့်ရန်သင့်ခရက်ဒစ်ကဒ် (s) ကို download လုပ်ပါနှင့်ချိတ်ဆက်ရှိသည်။ သငျသညျခကျြခငျြးသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခရက်ဒစ်ကဒ်ချိတ်ဆက်နေဖြင့် $5ရပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်းကဒ်ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏မိတ်ဖက်စားသောက်ဆိုင်များ, အရက်ဆိုင်များနှင့်စျေးဆိုင်မဆိုမှာငွေပေးချေမှုအောင်, သင်ပြန်ပိုက်ဆံရပါလိမ့်မယ်။ ဦးဆောင်ကွင်းဆက်စတိုးဆိုင်များနှင့်အတူသငျသညျမြားကိုလညျးကျောဒေသခံဒေသများမှာငွေသားရနိုင်သည်။
Dosh သင့်တည်နေရာကိုဝင်ရောက်ဖို့ကဘယ်မှာသင်ငွေသားပြန်ပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်သင်ပြောပြလိမ့်မယ် Allow ။ ဖြစ်သကဲ့သို့ရုံသင်၏အသက်တာကိုခံစား။ Dosh သင်တစ်ဦးအနီးအနားမှာဘီယာသွားရောက်လည်ပတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ညစာနေ့စွဲရှိခြင်းအားဖြင့်နောက်ကျောငွေရတယ်လျှင်သင်သိပါစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစလွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေအဖြစ် $5ချေ။ သင်သည်သင်၏အကောင့်အား PayPal, Venmo, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်သိုက်ကနေတစ်ဆင့်ငွေသားရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအခွအေနေသင့် Dosh အကောင့်ပေါ်မှာအနည်းဆုံး $ 25 ရှိသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Rakuten ကဲ့သို့ပင် BeFrugal သင်တို့ကိုလည်းစျေးဝယ်သည့်အခါကျောငွေဝင်ငွေမိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်၏ 1000s ရှိပါတယ်။ သင်တို့မူကား BeFrugal အပေါ်အခမဲ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 40 စတိုးဆိုင်များမှာပတ်ပတ်လည် 5000% ၏ငွေသားပြန်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစခြားပြီးသူတွေကိုပြန်အမ်းကနေအထူးနှုန်းများ codes တွေကိုနှင့်ကူပွန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စုဆောင်း။
ဒီ app ကိုအစဉ်အမြဲ update လုပ်က၎င်း၏အထူးနှုန်းများ codes တွေကိုစောင့်ရှောက်။ သငျသညျကုန်ဆုံးသောမည်သည့်ကုဒ်, ဖြတ်ပြီးလာကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ကုမ္ပဏီထံမှ $5ရပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအပေးအယူပေး, BeFrugal အမြဲကအခြားငွေသားပြန်ပြိုင်ဘက်နှင့်အတူ၎င်း၏အထူးလျှော့စျေးနှိုင်းယှဉ်။
သငျသညျ BeFrugal ထက်ပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကိုအခြားငွေသားပြန် site ကိုရှာတွေ့ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်ထိုနှုန်းသည်နှင့်အတူ 25% အပိုရလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာအစလွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေအဖြစ်အသစ်သောအဖွဲ့ဝင်များနှင့် $ 10 မှကြိုဆိုလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ် $ 10 ကမ်းလှမ်းနှင့်သင့်မိတ်ဆွေတစ်ကျောငွေသားအဖြစ် $ 10 မှတက်ရရှိသွားတဲ့။
နောက်ကျောကို PayPal သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်သိုက်မှတဆင့်ငွေသားရွေးနှုတ်တော်မူရန်, သငျသညျနိမ့်ဆုံးဟန်ချက်မလိုအပ်ပါဘူး။ စစ်ဆေးမှုများကနေတဆင့်ရွေးနှုတ်တော်မူရန်, သင်သည်သင်၏ account ကိုအပေါ်ကိုအနည်းဆုံး $ 25 ရှိသင့်ပါတယ်။
SwagBucks ပြန်စျေးဝယ်နေစဉ်ဆုများရရှိရန် app ကိုသေးသည်အခြားငွေသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 1500 ကျော်မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များရှိပြီးဒါဟာလက်ဆောင်ကတ်များပြန်ရက်စွဲမကုန်မှီတိုင်အောင်ငွေသားအဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုသူများဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ $ 327 သန်းပေးဆောင်ခဲ့သည်။
သငျသညျတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ယင်း၏ browser ကို extension ကိုသုံးပြီးမှတဆင့်စျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စတိုးဆိုင်ရှာဖွေမှုရလဒ်တွေ SwagBucks နှင့်အတူပူးပေါင်းလျှင်ဒါဟာသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်တို့နှင့်အတူအအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်မည်မျှငွေသားပြန်မြင်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီအစားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်များအတွက်ပေးဆောင်တဲ့, သင်အားဖြင့်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေနိုင်သည် -
သင်တို့အဘို့မှတ်ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ် အမေဇုံလက်ဆောင်ကဒ် သို့မဟုတ်အခြားစတိုးဆိုင်, ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ပူးပေါင်းသည့်ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုခုသို့သင့်င်ငွေလှူဒါန်းမှု, ဒါမှမဟုတ်ငွေသားအဘို့ PayPal ကနေတဆင့်ဆုရွေးနှုတ်တော်မူ။
TopCashBack အမှန်တကယ်င်း၏ဝင်ငွေ-sharing မူဝါဒနှင့်ထွက်ရပ်။ သည်အခြားငွေသားပြန်တွင်ကျယ်စွာမတူဘဲ, ကအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ၎င်း၏ကော်မရှင်အပေါငျးတို့သဝေမျှပေးသည်။ အဲဒီအစားရည်ညွှန်းထံမှဝင်ငွေထက် TopCashBack စပွန်ဆာများနှင့်ကြော်ငြာတွေကတဆင့်ရရှိ။ ထို့ကြောင့်, သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုမတှေ့နိုငျသောအကောင်းဆုံးအပေးအယူအချို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစကိုက်ညီကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့အပေးအယူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
သငျသညျဝင်ငွေအခမဲ့ TopCashBack အတူတက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအအပေးအယူများအတွက် website နှင့်ရှာဖွေရေးသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ယင်း၏အရာရှိတဦးက Android app သို့မဟုတ် browser ကို extension ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာ 4400 ကျော်မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များရှိပြီးသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအကောင့်တစ်ခုဖန်တီး $ 10 ရရှိသည့်အခါလွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေအဖြစ် $ 10 ပေးထားပါတယ်။
Dosh ကဲ့သို့ပင် Drop app ကိုလည်းသူတို့နှင့်ဆက်စပ်ကဒ်ကို အသုံးပြု. ၎င်း၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များမဆိုမှာစျေးဝယ်သည့်အခါယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်ဆုလာဘ်အချက်များဝင်ငွေပေးနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးသင် app ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့်သင့်အကြွေးဝယ်ကတ်များလင့်ထားသည်ကြောင့်ကြွင်းသောအရာပြုစေရန်လိုအပ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းစားသောက်ဆိုင်နှင့်အခြားသူများမှာအစာစားခြင်း, Uber စီးအဖြစ်နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်အပေါ်ဆုလာဘ်အချက်များရနိုင်သည်။
သင်တို့သည်လည်းပိုပြီးကယ်ဖို့အထူးကမ်းလှမ်းချက်များအဘို့ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့ကုဒ်တွေနဲ့လွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေအဖြစ် $5ချေ။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်း code ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ဆုလာဘ်ရရှိလျှင်သင်နှစ်ဦးစလုံး $5ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာနောက်ကျောအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင်အနီးရှိ၎င်း၏မိတ်ဖက် store မှာစျေးဝယ်နေစဉ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ app ကိုသေးသည်အခြားငွေသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငွေသားပြန်၏ရာခိုင်နှုန်းပူဇော်ဖို့မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျစျေးဝယ်မတိုင်မီကမ်းလှမ်းမှုကိုကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Ibotta င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျ၎င်းငျး၏အန်းဒရွိုက် app ကိုဒေါင်းလုပ်ကအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးစတိုးဆိုင်များကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ရရှိနိုင်ကွဲပြားခြားနားသောကမ်းလှမ်းမှုရှာဖွေပါ။
သငျသညျကွီးစှာသောကမ်းလှမ်းမှုကိုတှေ့လြှငျ, ရွေးနှုတ်တော်မူဖို့သုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် -
ယင်း၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်ထဲကတစ်ခုကနေ loyalty ကဒ်ချိတ်ဆက်ပါ
အဆိုပါလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့ apps များထဲကတစ်ခုမှတဆင့်စျေးဝယ်
သငျသညျအထူးသဖြင့်သင်ကကုန်စုံစျေးဝယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြီးမားသောဝယ်ယူစေသောအခါအနီးအနားစတိုးဆိုင်များမှာပိုပြီးကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်ပထမဦးဆုံး 10 $ 20 ဆုကြေးငွေကြိုဆိုပါတယ်ရရှိရန်ကမ်းလှမ်းရွေးနှုတ်တော်မူရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း 505အတွင်းမှတ်ပုံတင်ရန်အခါသင်အပိုဆောင်း $ 1 ရနိုင်st ပိုးရွများနှင့်လွှဲပြောင်းကုဒ်ကိုသုံးပါ။ သငျသညျကို PayPal သို့မဟုတ် Venmo သုံးပြီးထွက်လက်ငင်းငွေချေသို့မဟုတ် $ 20 ၏နိမ့်ဆုံးချိန်ခွင်လျှာအတူလက်ဆောင်ကဒ်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
ဒါဟာ Drop နှင့် Dosh နဲ့တူနီးပါးတူညီ features တွေရှိပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက် FreeBird Lyft နှင့် Uber နှင့်အတူစီးနင်းဘို့သင့်ကိုဆုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတိကျတဲ့စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်အဖြစ်စီးပေါ်ပြန်ငွေဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ Uber သို့မဟုတ် Lyft app ထဲမှာမဆိုအထူးလျှော့စျေးသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်နှင့်အတူဆုလာဘ်ရမှတ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ကဒ်လင့်ထားသည်နှင့်ဒီ app ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့စီးနင်းစာအုပ်ဆိုင်။ ဒါဟာ Lyft သို့မဟုတ် Uber ကနေနှုန်းထားများရရှိသွားတဲ့။
RetailMeNot ကိုသင်စျေးဝယ်သည့်အခါဝင်ငွေဖို့အကောင်းဆုံးငွေသားပြန် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသငျသညျအခမဲ့ sign up ကိုနှင့်၎င်း၏ချိတ်ဆက်စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်အပေးအယူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားရရှိနိုင်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုကူပွန်များနှင့်အထူးနှုန်းများ codes တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အားလုံးသင်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်စျေးဝယ်နေစဉ်နောက်ကျောငွေဝင်ငွေရန်ရှိသည်။
သင်ရုံသင်ကဖြတ်သန်းသွားသည့်အခါတိုင်းတစ်ဦးဝယ်ယူအောင်ပြီးနောက်ပြန်ငွေသားရလိမ့်မယ်။ ကဒ်ကိုသုံးပြီးပြန်ငွေဝင်ငွေစေရန်, RetailMeNot အကောင့်အတူတူလင့်ထားသည်။ သငျသညျက၎င်း၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များ (အော့ဖ်လိုင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း) မှာစျေးဝယ်အခါတိုင်း, သင်ကတ်ကို အသုံးပြု. အဘို့ဆုရနိုင်သည်။
သငျသညျ RetailMeNot အပေါ်အချို့သောကြီးမြတ်အပေးအယူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျစိတျထဲမှာထားသငျ့တချို့အားနည်းချက်တွေကိုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်သင့်ရဲ့ဝယ်ယူပြီးနောက်သင့်အကောင့်ပေါ်ပြန်လက်ငင်းငွေချေရ 45 ရက်ပေါင်းထက်ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်မှာဦးတည်းသောသင်သင်၏ PayPal အကောင့်နဲ့သာရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်သောကြောင့်ရွေးချယ်စရာကြောင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မဟုတ်ထွက်လက်ငင်းငွေချေဖြစ်ပါတယ်။
တတိယတစ်ခုအဖွဲ့ဝင်သစ်ထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ဆုကြေးငွေ sign up ကိုမလွှဲပြောင်းဆုကြေးငွေလည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကအများဆုံးကိစ္စများတွင်ပိုက်ဆံကိုကယျတငျနိုငျသျောလညျး, RetailMeNot နေဆဲဤစာရင်းတွင်ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်ထိုက်ပါဘူး။
သင်ကုန်စုံစျေးဝယ်အပေါ် save ကိုကူညီနိုင်မယ့်ငွေသားပြန် app ကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမကနောက်ထပ်ထွက်ရန် 51 ထက်ကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျတော်တော်များများဦးဆောင်ဆေးဆိုင်များနှင့်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်မှာထုတ်ကုန်အပေါ်အပေးအယူများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အားလုံးသင်က Android app ကို download လုပ်ပါနှင့်သင့်ပတ်လည်ကမ်းလှမ်းမှု browse ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အထဲတွင် featured ထုတ်ကုန်မဆိုစျေးဝယ်နှင့်သင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း upload ။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစျေးဝယ်အပြီးသင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းကုဒ်ကိုငါပေးမည်။ တက်လက်မှတ်ထိုးတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီမိတျဆှေ, သင် $5ရပါလိမ့်မယ်။
သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်အော်ဂဲနစ်ပေမယ့်ဘာမျှမပိုနှစ်သက်ပါက, BerryCart go ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အိတ်ကပ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျကောငျးဖြစ်ကြောင်းငွေသားကျောပေးထားပါတယ်။ အနီးအနားမှာယင်း၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များမှာကျန်းကျန်းမာမာနှင့်သဘာဝအစားအစာထုတ်ကုန်အပေါ်ပူအပေးအယူတွေ့ရှိရန်ယခုဒီ app ကို download လုပ်ပါ။ စျေးဝယ်ပြီးနောက် app ကိုရန်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတင်ခြင်း, ချက်ချင်းပြန်ငွေသားရ။
သင်သည်သင်၏ account ကိုအပေါ် 24 နာရီအတွင်းပြန်ငွေသားရလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင်သည်အဖြစ်ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ် လက်ဆောင်ကဒ် သို့မဟုတ် PayPal ကနေတစ်ဆင့်။ သငျသညျ sign up ကိုတစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်လည်းလွှဲပြောင်းကုဒ်မျှဝေအားဖြင့်က register လုပ်သွားသူကိုလူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ $2ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
FetchRewards မှာ, သင်ကကမ်းလှမ်းအချက်များသုံးပြီးလက်ဆောင်ကတ်များအဘို့ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ်။ FetchRewards တကယ်သင်သည်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်သင်အများဆုံးစျေးဝယ်ရှိရာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။ အားလုံးသင်သည်မည်သည့်ဆေးဆိုင်, ကုန်စုံစတိုးဆိုင်, စတိုးဆိုင်, အရက်စတိုးဆိုင်, etc ကနေစျေးဝယ်ခြင်းနှင့်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ upload ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ app ကိုယင်း၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်ထဲကတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏ဝယ်ယူမှုစစ်ဆေးပေးတယ်တစ်ချိန်ကကိုသင်မှတ်ရလိမ့်မယ်။
နောက်ပိုင်းပေါ်, သင်သည်အဘို့အစသည်တို့ကိုနည်းပညာစတိုးဆိုင်, အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်, ချစ်ခြင်း, မှာအချက်များကိုရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်ပါတယ် လက်ဆောင်ကဒ်။ ဝင်ငွေရရှိမှုအသီးအသီးကမ်းလှမ်းမှုအပေါ် $2မှတက်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ငွေစုတက်စုဆောင်းချင်လျှင်သင်ဝင်ငွေအဆိုပါအချက်များသင့်ရဲ့ကြိုးစားရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်၏အဆွေခင်ပွန်းသင့်ရဲ့လွှဲပြောင်းကုဒ်များကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင် 2000 အချက်များရနိုင်သည်။
အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်အဘို့အသငျသညျ OpenTable သုံးပြီးခဲ့ပြီနည်း စားသောက်ဆိုင်မှာစားပွဲ booking သနည်း သင်ဒီ app တွေနဲ့အလုပ်သဘောညစာအမှတ်ရနိုင်ကြောင်းကိုသိသလား? သင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်လာမယ့်အချိန်ကစားပွဲတစ်ခုစာအုပ်ဆိုင်သည့်အခါအလုပ်သဘောညစာအမှတ် ပတ်သက်. အသိပေးချက်ကိုရှာဖွေပါ။ သငျသညျအမေဇုံလက်ဆောင်ကဒ်ကဲ့သို့သောအချက်များကိုရွေးနှုတ်တော်မူသို့မဟုတ်သင်၏နောက်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်သည့်အခါနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအကြိုးကိုအချက်များနှင့်အတူရရှိမည်ပမာဏကိုစားသောက်ဆိုင်ကနေစားသောက်ဆိုင်ခြားနားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ရှေး 10 အချက်များကစားသောက်ဆိုင်ကနေ $ 2000 ရနိုင်သည်။ ကြောင်းဆုသင်သည် $ 20 သို့မဟုတ်တူညီသောအချက်များများအတွက် $ 25 တတ်နိုင်သမျှအချို့လည်းရှိပါသည်။ သငျသညျတွေအများကြီးထွက်စားသောက်လျှင်သင်ဒီ app ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အဲဒီအစားပြန်သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုအပေါ်ငွေရတဲ့, သင်အမေရိကန်လင်းယုန်သို့မဟုတ် Best Buy နဲ့တူစတိုးဆိုင်များမှာလက်ဆောင်ကတ်များအဖြစ်ရွေးနှုတ်တော်မူနိုင်သည်ကိုဆုလာဘ်အချက်များအဖြစ် "ကန်ဘော" ရနိုင်တယ်။ သငျသညျ ShopKick မှာရရှိနိုင်ဗီဒီယိုကြည့်သို့မဟုတ်ယင်း၏မိတ်ဖက်စတိုးဆိုင်များမှာအွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုအောင်အဘို့အကန်ဘောရရှိနိုင်သည်။
new users တော်တော်များများကကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရအထိ $2တစ်လက်ဆောင်ကဒ်ရွေးနှုတ်တော်မူရန်တစ်ပါတ်အတွင်းဤမျှလောက်များစွာသောအချက်များဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသူငယ်ချင်းများကိုရညျညှနျးနဲ့ဒီ app နှင့်အတူအပိုဆောင်းအချက်များရနိုင်သည်။
အခြားအကိုအကောင်းဆုံးငွေသားပြန် apps များအများကြီးမတူဘဲ, ငွေလက်ခံပြေစာမွေးမြူအခြေခံအားဖြင့်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်၏ဒေတာစုဆောင်းအစားတိကျသောထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်မှသူတို့ကိုမပို့အာရုံစိုက်ပါ။
ကြောင့်ဒီအကြောင်းပြချက်မှ, သင်တို့သည်နောက်ကိစ္စအဘယ်အရာကိုမဆိုစတိုးဆိုင်မှာကျောငွေရနိုင်တယ်။ အားလုံးသင်တစ်ဦးလက်ခံရရှိ၏ရုပ်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင်စျေးဝယ်တဲ့အခါမှာဒင်္ဂါးပြားရွေးနှုတ်တော်မူရန်လိုအပ်သည်။
သင်တို့သည်ဤ apps များအားလုံးကို အသုံးပြု. နေ့စဉ်စျေးဝယ်ခြင်းဖြင့်ကျောငွေဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သင်ရုံချွေတာရေးအဘို့အ overspending start မဆိုလိုပါ။ သင်လိုအပ်ထုတ်ကုန်စျေးဝယ်ရန်ရှိသည်တဲ့အခါမှသာဒီ app ကိုသုံးပါ။ သငျသညျကျောသင်၏နောက်ခရီးသွားအစီအစဉ်များအတွက်ငွေစုအဖြစ်သင့်ငွေကိုတက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်ငွေ App ကို - ...
အခမဲ့ PSN Get ...
အကောင်းဆုံးငွေ Back ကို Android App များ အကောင်းဆုံးငွေသို့ပြန်သွားရန် Apps ကပ ငွေသားသို့ပြန်သွားရန် Apps ကပက Android